बाढीपीडितको रकम हिनामिना | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / बाढीपीडितको रकम हिनामिना
बाढीपीडितको रकम हिनामिना
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड 18 days ago	0 30 Views
एक हप्तामा विवरण देखाउन प्रशासनको आदेश
बाके । बाढीपीडितका लागि आएको रकम तत्कालीन गाविस सचिवहरुले ‘पेश्की’का रुपमा लिएर खर्च गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाकेले अहिले आएर चासो देखाएको छ।
लक्ष्मणपुर बा“ध पीडित संघर्ष समितिले बाढीपीडितका लागि गाउमा गएको रकम समेत वितरण नगरी तत्कालिन गाविस सचिवहरुले खर्च गरेको भन्दै दिएको निवेदनलाई आधार मान्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संघीय अयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई राहतको बारेमा के कसो भएको हो ? हाल उक्त पेश्की रकम वितरण भएको छ कि छैन ? एक हप्ताभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आदेश अनुसार अनुरोध गरेको हो।
२०७१ सालमा आएको बाढीबाट आंशिक पीडित भएकालाई प्रतिघर पाच हजार रुपैया“ दिन दुई करोड रुपैया जिल्लामा आएको थियो। त्यो रकम अहिलेसम्म बा“डिएको छैन। तत्कालीन गाविस सचिवहरुले ‘अपुग’ पैसा आएको भन्दै बाडेका थिएनन्। धेरैजसोले त्यो रकम आफैले चलाएका छन्। खर्च गरिएको रकमको सोधीखोजी हुन थालेपछि गाविस सचिवहरुले पेश्कीको रुपमा खर्च गरेको भन्दै देखाउन थालिएको छ।
तत्कालीन वनकट्टी गाविसका सचिव नन्दकिशोर मिश्रले पा“च लाख रुपैया“ फिर्ता गरेका छन्। अरु गाविस सचिवहरुले फिर्ता गरिसकेका छैनन्। केहीले गाउपालिकाको खातामा राखिदिएको दाबी गरिरहेका छन्। संघर्ष समितिले सूचना माग्दा संघीय आयोजनाकार्यान्वयन इकाईले अहिलेसम्म त्यो रकम बा“डेको थाहा नभएको र पेश्की पछ्र्यौट नगरेको जानकारी दिइसकेको सचिव राजकुमार शुक्लाले जानकारी दिनुभयो।
२०७१ सालमा बाकेमा आंशिक क्षति भएका नौ हजार तीन सय ३० घरपरिवार थिए। उनीहरुलाई पा“च÷पा“च हजारका दरले राहत दिने भनिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आंशिकका लागि आएको दुई करोड रुपैया“ सम्बन्धित गाविसमा पीडितलाई दिन दामासाई हिसाबले बा“डेर पठाइएको थियो।
त्यतिबेला राप्ती नदीमा आएको बाढीले सबैभन्दा धेरै साविकको फत्तेपुर, होलिया, बेतहनी, गंगापुर, कम्दी, वनकट्टी गाविसमा क्षति पु¥याएको थियो। फत्तेपुरमा दुई हजार दुई सय ३० जना आंशिक क्षतिमा परे।
तीमध्ये छ सय ५० जनालाई पाच हजारका दरले ३२ लाख ५० हजार आएको थियो। होलियामा एक हजार चार सय ६६ पीडित रहेकोमा चार सय ७५ जनाका लागि २३ लाख ७५ हजार, बेतहनीमा एक हजार दुई सय १४ जनामध्ये तीन सय ७४ जनालाई १८ लाख ७० हजार, गंगापुरमा नौसय ४० जनामा दुई सय ७५ जनाका लागि १३ लाख ७५ हजार, कम्दीमा तीन सय ८९ मध्ये सय जनाका लागि पॉ“च लाख, वनकट्टीमा तीन सय ४६ मध्ये सयजनाका लागि पाच लाख रुपैया“ पठाइएको थियो। साविकका होलिया, बेतहनी, वनकट्टी, कम्दी गाविस अहिले डुडुवा गाउ“पालिकामा पर्छन्।
Previous: चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागत तयारी, लाभहानिको हिसाबकिताब हुनेछैनः प्रम
Next: झिमरुकमा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन